उपत्यकामा ‘लेजर स्पिड गन’ : दिनमा ७० भन्दा बढी कारवाहीमा | नेपाली पब्लिक उपत्यकामा ‘लेजर स्पिड गन’ : दिनमा ७० भन्दा बढी कारवाहीमा | नेपाली पब्लिक
उपत्यकामा ‘लेजर स्पिड गन’ : दिनमा ७० भन्दा बढी कारवाहीमा
नेपाली पब्लिक २०७६, १० असार मंगलवार १९:१५
काठमाडौँ – ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा एकेडेमीअगाडि बा.७५ प ८०६५ स्कुटरचालक मद्दत श्रेष्ठ ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परेका थिए। कारण थियो सवारीसाधन तीव्र गतिमा चलाएकोे। प्रहरीले उनलाई ‘लेजर स्पिड गनको प्रयोग भइरहेको छ थाहा छैन ?’ भने। मलाई थाहा भएको भए म यसरी चलाउँदैनथिएँ भनेर उनले जवाफ फर्काए। एकछिनको विवादपछि उनलाई चिट काटेर हातमा थम्याइयो।
त्यस्तै, प्रदेश ३, ०६६ प ६८६५ मोटरसाइकल चालक ईश्वर राईलाई ट्राफिक प्रहरीले छेउमा बोलायो। ‘किन बोलाउनुभयो’ भन्दै उनले प्रश्न गरे। एक प्रहरीले भने, ‘तपाईंले धेरै गतिमा मोटरसाइकल चलाउनुभयो, त्यही भएर बोलाएको।’ राईले भने, ‘मेरो अगाडि रहेको गाडीले मलाई ओभरटेक गर्न खोज्दा यस्तो भयो।’ तर, प्रहरी भने उनको कुरामा ध्यानै नदिई ‘ल हेर्नुस्, तपाईंले ५८ किलोमिटरको गतिमा चलाइरहनुभएको छ’ भन्दै लेजर स्पिड गन देखाए। चालक राईले भने, ‘यस्तो नियम बनाएको थाहै थिएन, एकचोटिलाई माफ गर्दिनुस्, अबदेखि यस्तो हुँदैन।’ तर, ट्राफिक प्रहरीले भने उनको ब्लूबुक लिएर रातो चिट काटेर हातमा थमाइदिए।
अर्को छेउमा बा. ६४ च ९८३८ अर्को सवारीसाधन रोकिरहेको थियो। ती सवारीवाला प्रहरीलाई भन्दै थिए, ‘सर्वसाधारणलाई नेपालमा बाँच्न दिँदैनन्। यस्तो फराकिलो सडकमा रेस खेलेर जित्नु भन्ने छैन हामीलाई। आज काम परेर अलिक बढी गतिमा चलाएको थिएँ।’ तर प्रहरीले भने मेशिनमा दर्ता भइसक्यो भन्दै चिट काटेर दिन अर्को प्रहरीलाई आदेश दिइरहेका थिए।
लेजर गन कारवाहीमा यी तीन/चार जना मात्र होइन, दिनमा सयौँ सवारीचालकहरू पर्ने गरेको प्रहरी सहायक निरीक्षक (प्रसनि) मानबहादुर ठगुन्नाले बताए। उनले भने, ‘एक घन्टाको अन्तरालमा झण्डै २० भन्दा बढी सवारीसाधन कारवाहीमा पर्ने गर्छन्।
ट्राफिक प्रहरीले चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको कोटेश्वर–कलंकी सडक खण्डमा सवारीसाधनको गति न्यूनीकरणका लागि ‘लेजर स्पिड गन’ को प्रयोग गर्दै आएको छ। ८ लेनको यो सडकमा सवारीचालकहरूले तीव्र गतिमा सवारीसाधन चलाएका कारण धेरै दुर्घटना निम्तिएकाले ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यो ‘लेजर स्पिड गन’ नामक मेशिन सञ्चालनमा ल्याएको हो।
महाशाखाले यो सडक खण्डमा गत जेठ २० गतेदेखि ‘लेजर स्पिड गन’ को प्रयोग शुरू गरेको बताएको छ। महाशाखाका अनुसार अहिलेसम्ममा उक्त मेशिनको प्रयोगबाट ९ सयभन्दा बढी सवारीसाधन कारवाहीमा परिसकेका छन्। निर्माण सम्पन्न भएपछि हालसम्म यस सडक खण्डमा १५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सवारी दुर्घटनाको न्यूनीकरणकै लागि यो सडकमा मुख्य लेन ५० किलोमिटर प्रतिघण्टा र सर्भिस लेनमा २० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा चलाउन पाउने मापदण्ड बनाइएको ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ।
त्यही नियमअनुसार ट्राफिक प्रहरीहरूले ‘लेजर स्पिड गन’को प्रयोग गरी मापदण्डभन्दा तीव्र गतिमा सवारी चलाउनेलाई कारवाही गर्दै आएको प्रसनि ठगुन्नाले बताए। उनका अनुसार प्रत्येक दिन ८० भन्दा बढी सवारीसाधन कारवाहीमा पर्ने गरेका छन्। गत शुक्रबार भने १ सय १० जनालाई कारवाही गरिएको प्रसनि ठगुन्नाले बताए। उनका अनुसार कारवाहीमा पर्नेको संख्या यो नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै हो।
प्रसनि ठगुन्नाले भने, ‘तीव्र गतिका कारण विभिन्न समस्याहरू आएको हुनाले यो मेशिनको प्रयोग शुरू गरिएको हो। कतिपय सवारीचालकहरूले बिनाकारण कारवाहीमा गरेको भन्ने गुनासो पनि गरेका छन् भने कतिपयले भने राम्रो काम भन्दै प्रशंसा पनि गरेका छन्। कतिपय युवायुवतीहरूले फराकिलो रोडमा तीव्र गतिमा चलाउनै नपाइने भए यत्रो ठूलो रोड किन बनाएको ? भन्ने प्रश्न पनि गर्ने गरेका छन्।’ कारबाही पर्नेमा सबैभन्दा बढी दुईपाङ्ग्रे मोटरसाइकल नै रहेको उनको भनाइ छ।
‘कारवाहीमा पर्ने सवारीचालकहरूलाई १ हजार जरिवाना गर्ने नियम बनाइएको छ। धेरैले ‘थाहा भएन, एक चोटिलाई छुट दिनुस्’ भन्ने गर्छन् तर नियम बनाएपछि हामीले नियम पालना गर्नैुपर्छ,’ उनले भने। लेजर स्पिड गनले १ सय ५० मिटर दूरीसम्मको सवारीको गति जाँच्ने काम गर्छ। तर १ सय ५० भन्दा बढी दूरीको सवारीलाई भने निगरानी गर्न सक्दैनन्।’
लेजर स्पिड गन दिनमा तीन पटक प्रयोग गर्दै आएको प्रसनि ठगुन्नाले जानकारी दिए। उनका अनुसार बिहान ७ देखि ८ बजेसम्म, दिउँसो १ देखि २ बजेसम्म र बेलुकी ४ देखि ६ बजेसम्म गरी प्रत्येक दिन चार घण्टा उक्त मेशिनको प्रयोग भइरहेको छ। बिहानको समयमा खुल्ला सडक भएका कारण मानिसहरूले धेरै गतिमा चलाउने भनेको बिहानकै समय भएको पाइएको उनले बताए।
दिनमा चार घण्टा प्रयोग गर्दा त यति धेरै कारवाहीमा पर्छन् भने दिनभरि नै प्रयोग गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा डब्बल संख्यामा कारवाहीमा पर्ने उनले दाबी गरे।
लेजर स्पिड गनको प्रयोग प्रभावकारी बन्दै गएकाले ट्राफिक महाशाखा भने यो मेशिनबाट सन्तुष्ट रहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका डीएसपी पदमबहादुर विष्टले बताए। उनले भने, ‘फराकिलो सडकले गर्दा मानिसहरू आँखा चिम्लेर सवारीसाधन चलाउने गर्छन्। त्यसले गर्दा धेरै दुर्घटना हुन्छ।’ उनका अनुसार यो मेशिनले गर्दा हाल दुर्घटनामा कमी आएको छ।
कोटेश्वर–कलंकी मात्र होइन, भक्तपुर सडक खण्डमा पनि यो मेशिन प्रयोग गरिँदै आएको छ, जसले गर्दा अहिले उक्त सडकमा पनि सवारी चालकहरूले गति कम गर्दै आएको डीएसपी विष्टले दाबी गरे। हाल ट्राफिक प्रहरीसँग तीनवटा ‘लेजर स्पिड गन’ उपलब्ध छन्।
‘लेजर स्पिड गन’ सडकमा गुड्ने सवारीको गति मापन गर्ने क्यामेराजडित एक उपकरण हो। यसले सवारीको तस्वीरसहित सवारीको गति मापन गर्छ। यसमा सवारीसाधनको गति, समय सबै उपकरणमा सजिलै देख्न सकिन्छ।
यो मेशिनले १ सय ५० मिटर टाढासम्मको सवारीसाधन कुन गतिमा दौडिरहेको छ भन्ने तस्वीरसहित देखाउँछ। त्यसैले ट्राफिकले उक्त मेशिनको प्रयोगबाट सवारीको गतिबारे जानकारी पाउँछन् र सवारीको गति मापदण्डभन्दा ज्यादा भएमा तुरुन्त बटम दबाएर सवारी चालकहरूलाई रोकी कारवाही गर्छन्। आवश्यक परेमा कारवाहीमा पर्ने सवारी साधनको विस्तृत विवरणसहित प्रिन्ट गरेर दिने व्यवस्थासमेत रहेको प्रसनि ठगुन्नाले जानकारी दिए।
‘लेजर स्पिड गन’
ट्राफिक प्रहरी महाशाखा